Qwilr: Ny lozisialy Document Design manova ny varotra varotra sy ny varotra | Martech Zone
Ny serasera ho an'ny mpanjifa no ain'ny asa rehetra. Na izany aza, amin'ny COVID-19 dia manery ny fanapahana teti-bola 65% ho an'ny mpivarotra, ekena ny ekipa hanao bebe kokoa amin'ny kely kokoa. Midika izany fa afaka mamorona antoka rehetra amin'ny varotra sy ny varotra amin'ny teti-bola mihena, ary matetika tsy misy rendrarantanan'ny mpamorona na masoivoho hamokatra azy.
Ny miasa sy mivarotra lavitra dia midika koa fa ny ekipa mpivarotra sy marketing dia tsy afaka miantehitra amin'ny fahaizan'ny fifandraisana eo amin'ny tena intsony mba hikolokolo sy hampitombo ny fototry ny mpanjifanao. Mitombo ny fangatahana antoka sy antontan-taratasy hanoloana ny serasera mifanatrika
Amin'ny fotoana toy izao, ny kalitaon'ny serasera sy ny fananana eo amin'ny varotra miaraka aminy dia mety ho fahasamihafana amin'ny orinasa mahazo, mitazona na very mpanjifa. Ankehitriny, mihoatra noho ny hatramin'izay, ny mpivarotra dia mila manatsara ny kalitaon'ny fananany nomerika mba hanampiana ny orinasa hampita tsara ny volavolan-kevitr'izy ireo ary hitondra lavitra ny hevitra mamorona.
Ny famonosana an'io famoronana io dia mety ho sarotra. Ny hevitra tsy mampino dia azo zahana ambany noho ny tsy fahaizan'ny serasera, ny famolavolana antontan-taratasy malemy, na ny fisafidianana a Ny habe dia iray template. Izany dia mahatonga ny fifandraisana amin'ny mpanjifa mety na efa misy tsy mahomby, tsy azo ovaina ary tsy voafitaka.
Famongorana ny famolavolana antontan-taratasy mahantra
Talohan'ny nandraisan'ny COVID-19 ny fiovan'ny asa lavitra, efa namboarina indray ireo fitaovana taloha. Saingy ny fanafainganana ny asa lavitra dia nidika fa niova ny andrasan'ny orinasa, ary ny haitao orinasa, indrindra ireo zavatra toa ny famolavolana antontan-taratasy, dia mila manana fahaiza-manao bebe kokoa hanohanana ny fomba fivarotana vaovao avy lavitra.
Na izany aza, rehefa niresaka tamin'ny ekipa aho dia hitako fa ny ankamaroany dia mbola manorim-ponenana amin'ny fanabeazana bodofotsy any am-pianarana na tolo-kevitra modely mamelombelona miaraka amina kopia kely sy apetaka hitehirizana fotoana. Matetika izy ireo dia mandefa ireo amin'ny alàlan'ny PDF static.
Tamin'ny taona lasa, 250 tapitrisa PDF no nosokafana niaraka tamin'ny rindrambaiko Adobe irery.
Rehefa mieritreritra an'izany ianao, dia mampino fa ny orinasa dia mbola mandefa ny asany tsara indrindra amin'ny antontan-taratasy tsy miova, izay tsy mamela anao hanova azy aorian'ny fandefasanao azy (raha mila izany - izay matetika mitranga!) Na jereo rehefa nosokafan'ny mpanjifa ny antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny fanadihadiana nataonao.
Qwilr dia famolavolana antontan-taratasy sy fitaovana mandeha ho azy manova ny fomba fifandraisan'ny ekipa mpivarotra sy ny marketing amin'ny tobin'ny mpanjifany. Izy io dia natsangana ho vahaolana amin'ireo fanamby atrehin'izao tontolo izao eo amin'ny sehatry ny varotra sy ny varotra, izay ateraky ny fomba fifandraisana ratsy sy taloha.
Tsapanay fa tsy manapaka azy amin'izao vanim-potoana izao ny PDF sy ny antontan-taratasin'ny Office Suite, kanefa ny fitetezana ireo fitaovana amin'ny famolavolana nomerika dia mety ho fanamby ho an'ny mpamorona endrika tsy sary. Noho izany, nanangana sehatra tsotra sy tsotra izahay mba hahafahan'ny mpivarotra mandrafitra tolo-kevitra, teny nalaina, vokatra iray pejy ary maro hafa. Ny antontan-taratasy rehetra koa dia manintona kanto ary mora noforonina, hitazomana ny fanantenana.
Mampiasà data mba hampahafantarana ireo paikadin'i Pitch
Rehefa mifindra amin'ny Internet ny fivoriana, ny mpivarotra sy ny mpivarotra dia tsy afaka miantehitra amin'ny fitenin-tena intsony mba hamaritana hoe nanao ahoana ny haavon'ny pitch iray, na ny fandraisana valin-teny avy eo aorian'ny fampisehoana.
Fa ny tena zava-dehibe, ny fahazoana ny psikolojia ao ambadiky ny fihetsiky ny mpanjifa dia singa iray lehibe tamin'ny fananganana Qwilr. Tokony hampahafantatra ny singa rehetra amin'ny fanentanana sy ny fanaovana tatitra ataon'ny mpivarotra izany. Ny fitaovan'i Qwilr dia feno fonosana amin'ny fandalinana an-tserasera ary afaka manambara ny antsipirihany izay tsy azony tamin'ny alàlan'ny fifandraisana virtoaly. Tafiditra ao anatin'izany ny fahafantarana hoe rahoviana ary na taiza no nanokafan'ilay nahazo ny antontan-taratasy, ireo fizarana inona no nandany fotoana betsaka indrindra, fampahafantarana ny fanarahan-dia ary ny paikady varotra hafa.
Mijanona amin'ny marika tsy miangatra
Amin'ny sehatra toy ny marketing, misy ny maha-izy azy ny marika sy ny sary dia zava-dehibe ny fampiratiana ny masonao amin'ny antsipiriany sy ny hatsarany avy hatrany. Amin'ny tranga maro dia matetika ny kalitaon'ny serasera no zava-dehibe kokoa noho ny tena hevitrao, indrindra rehefa mivarotra serivisy sy foto-kevitra tsy azo zahana. Ny mpanjifa koa dia mety hahatadidy ny fampahalalana nampitaina tamin'ny alàlan'ny sary an-tsary lava.
Ny tanjak'i Qwilr dia amin'ny fahatsorany, ary ny lampihazo dia feno fonosana mora ampiasaina, ary fananganana modular hamoronana antontan-taratasy voakolokolo haingana. Izany dia manamora kokoa ny fanaraha-maso ny fifandraisan'ny orinasanao manerana ny ekipa, mamerina ny tolo-kevitra sy hevitra tsara indrindrao raha mbola mijanona amin'ny marika ianao.
Ireo mpivarotra dia nampiasa Qwilr isaky ny dingana rehetra amin'ny dia nataon'ny mpanjifa, manomboka amin'ny fanantenana hatramin'ny faranana ny varotra ka hatrany amin'ny serivisy mitohy. Hita izany amin'ny ohatra amin'ny sehatra fitantanana fandaniana, Abacus, amin'ny fampiasana Qwilr hanolotra paikady marketing vaovao ho an'ny mpivarotra antsinjarany Kangaroo Shoes, izay nanandrana nitombo ny anjaran'ny tsenany.
Qwilr zareo tolo-kevitra nahitana serivisy marobe manerana ny marika, paikady atiny ary prototyping, tafangona anaty sehatra tokana izy rehetra. Izany dia nanamora ny fifehezana ny fifandraisan'ny orinasa amin'ny ekipa rehetra, ny asa tsara indrindra vitanao ary ny fijanonana amin'ny marika. Amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny fifandraisana an-tanana sy ny lozisialy miverimberina dia azonao atao ny mametraka ny tongotra matihanina tsara indrindra ho anao isaky ny mandeha.
Andramo maimaim-poana i Qwilr
Tags: Adobeantontan-taratasy marketingtolo-kevitra momba ny varotra marikafiaraha-miasa amin'ny antontan-taratasymodely tolo-kevitraqwilrantontan-taratasy varotra sy varotrafamolavolana antontan-taratasy fivarotanatolo-barotravolavola tolotra varotrarindrambaiko fanolorana varotraTolo-kevitra momba ny varotra